China ultrasonic ntụgharị Equiment nke ultrasonic vibration factory na-emepụta | Ike
ultrasonic Turn Equiment Mmetụta nke ultrasonic vibration
Aluminom Alloy Ultrasonic Machining Ngwá Ọrụ Nnukwu Ike Ogologo Ndụ Ndụ
rotary ultrasonic igwe
ultrasonic nyere aka egwu
ultrasonic Turn Equiment Mmetụta nke ultrasonic vibration oke
Achicha Boron carbide, aluminum oxide na sịlịkọn carbide
Nnukwu dị oke (d0) 100 - 800
Ugboro ugboro nke ịma jijiji (f) 19 - 25 kHz
Njupụta nke ịma jijiji (a) 15 - 50 .m
Ngwaọrụ Soft ígwè titanium alloy
Eyi ruru Tungsten 1.5: 1 na iko 100: 1
Nzọgharị 0.02-0.1 mm
Mmetụta nke ultrasonic vibration gbanwere n'ụzọ zuru ezu usoro geometric nke elu ahụ na-eweta. Fig 3-a, b na-egosi foto nke elu nke ọrụ nchara siri ike nke a gwọrọ site na ENGINEERING FOR Rural DEVELOPMENT Jelgava, 25.-27.05.2016.
Omenala 220 (nri aka nri) na ntụgharị ultrasonic (akụkụ aka ekpe) na ọsọ ọsọ nke 10 m · min-1 (a)
na 60 m-min-1 (b), na 0.05 mm · rev-1. Ihe omuma di iche na ogo nke elu bu ihe doro anya.
Elu nke enwetara site na ntụgharị ultrasonic nwere usoro mgbe niile. Nke a gosipụtara site na profaịlụ nke elu (Fig 3-c), nke a nwetara akụkụ aka nri site na ntụgharị ọdịnala na akụkụ aka ekpe - site na ntụgharị ultrasonic. Ntughari mmiri na-agagharị na usoro nri nke 0.05 mm, nke a ga-ahụ n'akụkụ abụọ nke profaịlụ, na-anọchite anya akara nke onye cutter ahụ. Na fig 3-ba nke nke ultrasonic ntụgharị na-egosiputa oge ntụgharị oge maka oge (yana ugboro 20 kHz) mmekọrịta n'etiti ngwa ọrụ na ibe ọrụ. Ọzọkwa, mbipụta dị otú ahụ, ọ bụrụ na ọ dịwanye, ka a na-ahụ n'elu (Fig 3-a), mana ebe a anaghị ahụ ha anya n'ihi na nzọụkwụ ha pere mpe nke ukwuu n'ihi ọsọ ọsọ dị ala.
Fig. 3. Igwe siri ike: a, b - ihe a na-emeso ya; c - ihe omuma nke profaịlụ
Ọdịiche dị otú ahụ na nsonaazụ ọnwụ na-akpata site na mgbanwe nke ọchịchị ọnwụ. Na nbibi nke ọdịnala n'okpuru mmekọrịta na-aga n'ihu n'etiti ngwa ọrụ na mpempe ọrụ, mpaghara nrụrụ plastik dị n'akụkụ mpaghara nke mbepụ ahụ ma na-agbasa ọsọ ọsọ. Mpaghara a juputara na micro-cracks, na-ekesa aghara. N'ihi ya, elu nwere nkesa na-adịghị agbanwe agbanwe nke microroughness. Mbelata nke Ultrasonic bụ nsonaazụ nke obere oge, na-enwe ihe ịga nke ọma. N'ihi oge ikwughachi ugboro ugboro na oge dị mkpirikpi nke ahịhịa nrụrụ plastik na-etinye uche na obere agbataobi nke elu nke ngwa ọrụ ahụ, mpaghara ahụ anaghị ejupụta na microcracks na-enweghị oge iji too. Ya mere, uzo nke onye cutter n’elu mpempe oru na-egosiputa n’ezie akara nke odidi ya, dika egosiri na Fig 3-b.
Ultrasonic malite ịgba maka ire ere
Ultrasonic Drilling igwe
Ultrasonic Drilling Machine Ndị na-eweta ya
Ultrasonic machining Ngwá Ọrụ Ihe
20Khz Auto Ndepụta Ultrasonic machining Vibra ...
Rotary Ultrasonic machining Ngwá Ọrụ Ultrasonic Dị ...
Vetikal Ultrasonic machining Ngwá Ọrụ 1000W Ultras ...
20Khz Autoresonant Ultrasonic ọgwụgwọ Ultraso ...
High Frequency at Kwekọrọ n'Ozizi 1khz Ultrasonic emetụtara ...